Ndingabelana ngamabali amabi oyikisayo kwimbali yam kunye neebhanki kunye namakhadi etyala. Eminye yayo iyimpazamo kodwa uninzi lwayo zizenzo ezihlekisayo zeebhanki. Ndiyazibuza ukuba balala njani aba bantu ebusuku… iingeniso ezinkulu, izibonelelo ezikhutshwayo, iibhonasi eziphezulu kunye nemirhumo yokuhlekisa engakhange ibashukumise ukuphucula iinkqubo zabo.
Nanku umzekelo omkhulu… ikhadi lam letyala lishicilelwe kabini xa useluhambeni. Ngaphambi kohambo zombini, ndazise i-bhanki ukuba ndiza kuhamba kwaye ndiqinisekise ukuba andikhange ndimakwe. Iminxeba yayiyinkcitha xesha-ndavalwa kabini Umsebenzi okrokrelayo. Ukuphinda-phinda kabini kwakwanele… kwaye inkqubo yakudala ye-intanethi kunye nokunqongophala kwenkxaso ngeempelaveki nasebusuku ekugqibeleni kwandenza ndabuyela ebhankini enkulu. Siza kubabiza ngokuba yiJP.
I-JP inenkqubo entle ye-Intanethi. I-JP ineentambo zangaphandle zamandla. I-JP ineapp apho ndingabeka khona itsheki ngokuthatha ifoto yayo. I-JP ikwanakho nokuhlawulwa nge-akhawunti yam. Mhlawumbi eyona nto ipholileyo… u-JP undinikeze ibhanki yam. Yintoni ibhanki yakho? Ngumntu ekufanele ukuba ndimthumelele i-imeyile kwaye ndimfowunele ngalo lonke ixesha ndinengxaki. Ibhanki yam yobuqu yandixelela inombolo eyi-1-800 ukuba ndiyitsalele uncedo. Uphuculo olukhulu kwinkqubo yakudala yokubiza nje inombolo eyi-1-800 kwindawo yokuqala. [Ewe, yingxolo leyo]
I-BTW: Ibhanki yam yobuqu isithandwa kwaye ndiyazi ukuba izama ukundinceda kangangoko inako. Ayilungisi ingxaki, nangona.
Kule mpelaveki bendifuna uku-odola amatikiti enqwelo moya Ukubandakanya inkomfa eSan Francisco ekupheleni kwale nyanga. Kuqala ndisebenzise uKayak kunye nekhadi letyala aliphumelelanga. Emva koko ndisebenzise indawo ye-Delta.com kwaye ayiphumelelanga. Omabini la maxesha ibisithi idilesi yam ayingqinelani neakhawunti yam. Ingxaki ekuphela kwayo yile dilesi yam efakwe ngokuchanekileyo ngendlela efanayo kuzo zombini iisayithi ngoko ke akukho kungangqinelani. Endaweni yokuxhoma, ndema ndibambekile ngelixa ummeli we-Delta ngokwakhe ebize ibhanki yam ukuqinisekisa idilesi. (Intle intle yeDelta!)
Indawo ye-Delta ayikuvumeli ukongezwa kwe-Zip4, ke ixesha elilahlekileyo phakathi kwee-imeyile zam kunye neebhanki zam zobuqu kwiqela lakhe lenkxaso kukuhlamba. Ndazisa umntu wam webhanki ukuba uyazi ukuba ayikasebenzi. Kwiintsuku ezine kamva kwaye andinawo amatikiti.
Okwangoku ungazibuza ukuba kutheni ndingathabathi nje elinye lamakhadi wam kwaye ndihlawule itikiti. Ngoba? Kuba oku kufanelekile ukuba kusebenze. Yile nto eyikhadi lokuthenga ngetyala elenzelwe… ukwenza izinto ezinje ngokubhukisha uhambo, ukuthenga izixhobo, njl do banezinye iindlela zokuthenga itikiti kwaye ndiqinisekile ukuba uninzi lwabantu luyitshitshisile inkqubo kwaye bayenzile loo nto.
Sonke sinyamezele ngokunyanisekileyo imisebenzi emininzi ebomini bethu. Simelana neempazamo zesoftware, imiba yebhanki, imiba yefowuni, imiba ye-Intanethi… ubomi bethu abubi lula ngayo yonke le nto, iya isiba nzima. Kwaye njengoko sisongeza ukuntsokotha, sifumana iingxaki ezingakumbi. Eyona nto iphambili kuzo zonke ezi ngxaki kukuba silindele ukuba izinto zisebenze kwaye singasaziphenduli iinkampani. Kulula ukuthatha elinye ikhadi lekhredithi kunokuqhubeka ufowunela kunye ne-imeyile ngebhanki yam.